के हुन्छ टोकियो ओलम्पिक ? : नेपालमाला
के हुन्छ टोकियो ओलम्पिक ?
टोकियो : विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रासका कारण जापानको टोकियोमा जुलाई २४ देखि अगस्ट ९ तारिखसम्म आयोजना हुने विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिक पनि अन्योलमा परेको छ। जापानले भने समयमै ओलम्पिक आयोजना गर्ने दाबी गरेको छ। जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले समयमै ओलम्पिक गर्न जापान तयार रहेको बताएका छन्।
‘कोरोना भाइरसका कारण ओलम्पिक सारिनु पर्ने कारण छैन। कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिने विषयमा हामी सचेत छौं,’ आबेले भनेका छन्। आबेले ओलम्पिक खेलकुदको अन्तिम टुंगो भने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले लगाउने पनि बताए। कोरोना भाइरसको कारण हाल विश्वभर खेलकुद प्रतियोगिता प्रभावित भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ठूला खेलकुद प्रतियोगिताहरू धमाधम रोकिएका छन्। ओलम्पिक आयोजनाका लागि जापानले ठूलो धनराशि खर्च गरिसकेको र तयारी झन्डै अन्तिम चरणमा पुगेकाले प्रधानमन्त्री आबेको यस्तो धारणा आएको हो। जापानले ओलम्पिकका लागि १.३५ ट्रिलियन जापानी येन खर्च गरिसकेको छ।
टोकियो ओलम्पिक समयमै आयोजना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आईओसीले भने निर्णय गरिसकेको छैन। जापानी प्रधानमन्त्रीले ओलम्पिक हुने दाबी गरिरहँदा आईओसीका सदस्य डिक पाउन्डले भने यही अवस्थामा ओलम्पिक हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले स्वास्थलाई ख्यालगरी आईओसी यसमा सचेत हुनुपर्ने पनि बताए।
ओलम्पिकलाई लक्षित गरी गरिएको तयारीलाई कतिपय देशले भने स्थगित गरिसकेका छन्। यसअघि ग्रिसबाट मार्च १३ गते सुरु गर्न लागिएको ओलम्पिक टर्च र्‍याली कोरोनाकै कारण स्थगित गरिएको थियो। जापानले ओलम्पिक टर्च र्‍यालीको कार्यक्रमसमेत मार्च २६ का लागि तय गरेको छ। टोकियोका गभर्नर युरिको कोइकेले टर्च र्‍याली जापानभित्रै गरिने बताए। अमेरिकाले ओलम्पिक खेलको तयारी यसअघि नै रोकिसकेको छ। टोकियो ओलम्पिकमा ३३ वटा खेल समावेश गर्ने निर्णय भइसकेको छ। जसका लागि दुई सय ६ देशका ११ हजार ९१ खेलाडीको सहभागिता रहने बताइएको छ।